Firy ny daty dia efa ampy alohan'ny hahatongavan'ny mpivady hiavaka? - Fifandraisana
Firy ny daty dia efa ampy alohan'ny hahatongavan'ny mpivady hiavaka?
Ny daty voalohany dia mety hampivadi-po.
Ny daty faharoa dia mety hahatsapa ho mahaliana kokoa.
Amin'ny fahatelo, mety mahazo aina kely kokoa ianao.
Fa firy ny daty alohan'ny hahatongavanao sy ity olona vaovao amin'ny fiainanao ity hanana fifandraisana manokana?
rahoviana no hiverina ny tsy henatra
Miankina amin'ny famaritanao zavatra izany rehetra izany.
Mety hiditra voalohany ao amin'ny ‘Mampiaraka’ dingana ary avy eo ianao dia mety manomboka ‘Mahita’ izany olona izany.
Manaraka, mety ho lasa ianao 'Manokana' mandra-piteninao farany ‘Ofisialy.’
Ny lalana eo anelanelan'ny dingana voalohany eo amin'ny fifandraisana dia matetika manjavozavo. Fa hiezaka mafy izahay hanazava ny tsirairay.
Firy ny daty mandra-panao 'mampiaraka' olona iray?
Ny fandehanana miaraka amin'ny olona roa dia tsy mitovy amin'ny fampiarahana amin'ny olona iray.
Ireo fifandraisana eo am-piandohana ireo dia ahafahanao mahatsapa azy ireo ary manapa-kevitra raha toa ka misy antony manohizana zavatra hafa kokoa.
Amin'ny daty roa na telo dia tokony hanana hevitra tsara ianao raha tianao io olona io ary raha toa ka mifanentana tsara amin'ny taratasy izy ireo.
Mety hatoky ny sainao ianao ary hahatsapa raha tokony hiantso azy io isan'andro na hanohy.
Raha ataonao daty efatra amin'ny olona iray io dia azo antoka ny milaza fa mampiaraka amin'izy ireo ianao.
Firy ny daty alohan'ny 'mahita' olona?
Tsy maharitra ny fotoana hifindrana amin'ny fiarahana amin'ny olona iray ka hahitany azy ireo.
Raha efa vitanao ny daty fahefatra ary efa tamin'ny dimy na enina daty ianao izao, ary nanjary raharaha lava kokoa ireo daty tao an-tranon'ny tsirairay, dia mety ho hitanao izany.
Ary raha nanjary ara-batana ny raharaha tamin'ity fotoana ity tamin'ny firaisana ara-nofo na traikefa akaiky hafa nitranga, dia midika tokoa izany fa fifindrana hahita olona fa tsy hiaraka amin'izy ireo.
Ny fotoana lanintsika miaraka dia zava-dehibe kokoa noho ny daty
Alohan'ny handinihantsika ny sehatry ny fifandraisana manokana sy ofisialy, dia mendrika ny maka aina ary mifanakalo hevitra momba ny teboka misimisy kokoa.
Voalohany, ny tena isan'ny daty andehananao dia angamba tsy dia misy ifandraisany loatra amin'ny totalin'ny fotoana niarahanareo.
Ohatra, raha naharitra andro fahavaratra lava ny daty faharoa narahinao, dia nitsahatra sasatra tao amin'ny valan-javaboary na teny amoron-dranomasina ianao, narahin'ny sakafo hariva sy zava-pisotro…
… Somary tsy mitovy amin'ny raha misotro zava-pisotro mandritra ny adiny iray na roa aorian'ny asa ianao.
Ny habetsaky ny resadresaka azonao atao mandritra ny andro iray manontolo dia afaka manampy amin'ny fananganana fifamatorana haingana kokoa noho ny hoe miparitaka amin'ny daty maromaro.
Eny, mety be ny fandefasana hafatra eo anelanelan'ny daty, saingy tsy azo ampitahaina amin'ny habetsaky ny teny nifanakalo olona.
Tsy afaka fotsiny.
Ny fifanakalozan-kevitra bebe kokoa dia mitarika amin'ny fanapahan-kevitra haingana kokoa momba ny tianao na tsia an'ity olona ity ary raha te hahita azy ireo indray ianao.
Ka mety manapa-kevitra ianao fa te ‘hampiaraka’ olona iray aorian'ny fivoriana roa lava fotsiny.
Ary mety hiditra amin'ny toe-tsaina 'fahitana' an'ity olona ity ianao amin'ny daty fahatelo.
Zava-dehibe koa ny fotoana anelanelan'ny daty
Raha nilaza izahay fa ny hafatra dia tsy mahasolo ny firesahana manokana, raha lava ny elanelana misy eo amin'ny daty, dia mbola manan-danja ihany ny fifamatorana azonao atao amin'ny alàlan'io.
Ka raha afaka mifankahita indray mandeha isan-kerinandro fotsiny ianao dia afaka mamorona fifandraisana ara-pientanam-po ny hafatra mahazatra mikoriana etsy sy eroa.
Ka mety mila iray na roa amin'izao fotoana izao daty kely kokoa hahatratrarana ny sehatra ahitanao olona ampitahaina raha mifanakaiky ireo daty ireo.
Ny elanelam-potoana dia mamela anao hieritreritra bebe kokoa momba ny olona iray, na koa hanonofinofy momba azy ireo sy ny mety ho fiheverana azy ireo ho sakaizanao na sipanao.
Izy io dia afaka manangana ny haavon'ny fanantenana ary hahatonga ny daty tsirairay ho somary mafimafy kokoa. Ity indray mandeha indray dia mety hidika fa vitsy ny fivoriana ara-batana ilaina amin'ny fifamatorana mafy.
Maharitra hafiriana ny fitiavana?
6 Fahasamihafana eo amin'ny fitiavana olona iray sy ny fitiavana
Famantarana 9 Tian'ny bandy anao nefa matahotra ny hanaiky izany
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny 'Exclusive' sy 'Ofisialy'
Hatramin'izao dia mety mbola hiaraka amin'ny olon-kafa ianao…
… Fa amin'ny farany, hanapa-kevitra ianao fa misy olona iray tianao hanaovana ezaka matotra kokoa.
Ny olona izay tsapanao fa manana ny tena mety ho vady ho avy.
maninona aho no tsy te ho lehibe
Amin'ity fotoana ity dia azonao atao ny mifanakalo hevitra amin'izy ireo momba ny hoe lasa manokana irery.
Ny maha irery anao dia midika fa tsy mampiaraka olon-kafa ianao ary azo antoka fa tsy manao firaisana ara-nofo na ara-batana amin'ny hafa.
Ho an'ny olona sasany, io dia mitovy amin'ny fanaovana ofisialy ny fifandraisana.
Hitan'izy ireo ho ampy izany fanoloran-tena izany mba hilazana fa ao anaty fifandraisana ianareo roa.
Ho an'ny hafa dia mety hisy ny tsy fitoviana eo amin'ny maha irery sy ny fifandraisana.
Mety ho hitan'izy ireo ity sehatra ity ho toy ny fanambarana kendrena mba hijerena ireo lafiny matotra kokoa amin'ny fifandraisana, fa tsy voatery ho mpivady vao tanteraka.
Karazana fitsapana ny rano, raha tianao.
Raha mbola tsy nanao ianao dia mety hifankahita amin'ireo naman'ny tsirairay na hiara-handany ny faran'ny herinandro.
Mety handehandeha doka kely mandritra ny andro vitsivitsy aza ianao.
Ity no fotoana mety hiresahanao resaka matotra tokony hatao raha ho avy eo amin'ny karatra ny ho avy lavitra.
Satria, andao hatrehana izany, mety mbola tsy niresaka momba ny iza aminareo no maniry ny ankizy ianao ary firy na aiza no tianao hipetraka na ny fiheveranao ny vola.
Ny olona sasany dia mety mahatsapa fa ireo zavatra ireo dia voasarona tsara sy voadio alohan'ny hanaovanao ny dingana farany fanoloran-tena amin'ny fifandraisana feno.
Ka… mandra-pahoviana no hahatratra ity dingana ity?
Firy ny daty alohan'ny hanaovanao ilay lahateny 'miavaka'?
Raha miverina amin'izay efa nolazainay izahay dia tsy ny datin'ny daty foana no zava-dehibe fa ny fotoana laninao niarahana na ny habetsaky ny fifandraisana nifanaovanao.
Amin'ny ankapobeny, resaka fifandraisana ara-pihetseham-po fa tsy daty tsy miangatra.
Mety te hanana manokana ianao aorian'ny daty efatra, na mety hahatsapa ho mahazo aina ianao miandry ny daty folo alohan'ny hanaovana izany switch izany.
Mila manontany tena ianao hoe matoky tena tokoa ve ianao fa mety hisy ny fifandraisana maharitra sy sambatra ary ahoana ny fahatsapanao raha manohy mampiaraka amin'ny olon-kafa izy ireo.
Raha, aorian'ny daty efatra na dimy, ianao dia mety hahatsiaro ho sosotra na maratra amin'ny alalàn'izy ireo miaraka amin'ny olon-kafa, fotoana tokony hanaovana ilay lahateny.
Etsy ankilany, raha mbola tianao ny hevitra mampiaraka olon-kafa sy mitazona ny safidinao hisokatra, dia tsy azonao antenaina ho irery ho anao izy ireo.
Raha te hitokana ianao dia asao ilay lahateny. Raha tsy rototra loatra ianao dia azonao atao ny miandry kely kokoa na mandra-panaon'izy ireo ny faniriany hanao toy izao.
Ka, Firy ny daty alohan'ny anaovanao amin'ny fifandraisana 'ofisialy'?
Tsy mila valiny azo antoka ny tsy faniriana te ho feo toy ny rakipeo vaky.
Ny olona sasany dia hihevitra ny tenany ho ao anaty fifandraisana amin'ny fomba ofisialy aorian'ny daty vitsivitsy. Ny sasany mety te hiandry mandra-pahatongan'ny daty folo na maromaro vao vita.
Ny isan'ny daty tadiavinao miandry alohan'ny hananganana fifandraisana mety dia ho anao manokana.
Antenaina fa ny halavan'ny halavan'ny olona iray hafa, na mety hanoratra olana izany.
Raha te-hanao sipa sy sipa ny antoko iray (na ny fampifangaroana azy) ary ny hafa tsy vonona dia mety hiteraka fihenjanana tanteraka amin'ny zavatra izany.
Ilay olona tsy mahatsiaro ho vonona dia mety hahatsapa ho teren'ny faneriterena hanao izany ary mety hiteraka azy ireo izany sintonina hahazoana toerana kely sy fomba fijery.
Na, mety ho hitanao fa fantatra amin'ny hoe ' toe-javatra ‘Izay ianao karazana miaraka, fa tsy amin'ny fomba ofisialy.
rehefa mandainga aminao ny namanao
Manokana ianao, fa tsy mijery ny mpivady maharitra. Ianao dia mandray isan'andro fotsiny rehefa tonga ary mankafy zavatra toa azy ireo.
Rahoviana aho no afaka miantso azy ireo hoe sipako / sakaizako?
Amin'ny ankapobeny, ianao dia te hiandry mandra-pahatonga anao ho mpivady ofisialy izay ifanarahan'ny roa tonta momba izay mety hitranga amin'ny ho avy alohan'ny hampiasanao ny teny hoe sipa sy sakaiza.
Ireo marika ireo dia famantarana ny fiarahana manolo-tena . Miresaka fatorana ara-pientanam-po izay mihoatra ny mampiaraka na mahita olona izy ireo ary mihoatra lavitra noho ny hoe manokana ho an'olon-kafa.
Firy ny daty alohan'ny hanorohana voalohany?
Ny olona sasany mahazo aina kokoa amin'ny oroka amin'ny daty noho ny hafa.
Noho izany, tsy tokony hahagaga raha mahafantatra fa ny olona samy hafa mankafy ny fanorohany voalohany amin'ny fotoana samihafa.
Betsaka ny olona hizara karazana oroka amin'ny daty voalohany, saingy mety ho peck kokoa noho ny snog io.
Na dia hahatsapa ho vonona ho feno aza ny sasany raha toa ka marina ny simia.
Ny sasany mety maniry ny hiandry ny daty faharoa na telo alohan'ny hidirany molotra amina olona iray.
Raha saro-kenatra na mpandala ny nentin-drazana manokana ianao dia mety maharitra ela kokoa. Tsy tokony hahatsapa ho terena ianao hanoroka olona alohan'ny fahavononanao.
Firy ny daty alohan'ny firaisana?
Toy ny fanorohana, ny firaisana dia mety hitranga amin'ny fotoana maro mandritra ny fifandraisana.
Misy ireo izay tia miandry ny fanambadiana alohan'ny firaisana, ary mety tsara izany.
Ny sasany dia mety manapa-kevitra ny hivoaka mandra-pahatongan'ny lahateniny ‘manokana’ alohan'ny hiarahan'izy ireo matory.
Ary ny sasany mety miandry daty roa fotsiny raha ilay fihenjanana eo amin'ny lahy sy ny vavy mahery.
Tsy misy valiny marina na diso. Miankina amin'izay tsapanao fa mety aminao izany.
Raha misy fanapahan-kevitra matotra sy olon-dehibe handrosoana ianareo roa dia safidinao izany ary tsy misy tokony hitsara anao amin'izany.
“Firy ny daty?” Tsy mety izany fanontaniana izany
Raha fintinina dia tsy ilaina foana ny manontany hoe firy ny daty tokony anananao alohan'ny dingana tsirairay amin'ny fifandraisana.
Tsy azonao atao koa ny manontany hoe firy herinandro na volana no mila mandalo.
Ny momba ny fihetsem-ponao sy ny fifandraisanao amin'ny olon-kafa no tena izy.
Ary momba ny safidin'ny tena manokana izany.
Ka raha mandeha haingana loatra ny raharaha ho anao, miezaha hampiadana azy ireo.
Raha tena miahy anao ny olon-kafa dia hanaiky ny handeha amin'ny hafainganana ianao.
Na dia mampatahotra aza ny mifanakalo hevitra momba ny fifandraisana amin'ny andro voalohany, dia zava-dehibe ny ahafahanao mampita mazava ny eritreritrao, ny fahatsapanao ary ny fanirianao.
izay tadiavin'ny lehilahy amin'ny vehivavy
Amin'ny fijanonana amin'ny pejy iray ihany, dia hanana vintana tsara kokoa ianao hanomboka fifandraisana eo amin'ny tongotra ankavanana.
Mbola tsy azonao antoka raha efa nanana daty ampy ianao hiantsoana ny tenanao manokana? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
ny fomba fanajana vehivavy amin'ny fifandraisana
tononkalo misy dikany avy amin'ny poeta malaza
mbola velona ve i lex luger
rehefa tia anao izy nefa matahotra
cm punk ary aj lee
ohatrinona no tianao azy
telo heny vs mpiady farany